के सुशान्तको ह’त्या भएको हो ? परिवारका सदस्यले खुलाए यस्तो रहस्य – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/के सुशान्तको ह’त्या भएको हो ? परिवारका सदस्यले खुलाए यस्तो रहस्य
के सुशान्तको ह’त्या भएको हो ? परिवारका सदस्यले खुलाए यस्तो रहस्य
काठमाडौं । बलिउड क्षेत्रमा आफ्नो सफलताको उचाई चढ्दै गरेका एक ३३ वर्षका युवाले आ’त्म ह’त्याको निर्णय गरेको समाचारले अहिले वलिउड तातेको छ । जसले जुनसुकै परिस्थितीमा पनि आ’त्म ह’त्याको बाटो रोज्नुहुदैन भन्ने सन्देश दिने चलचित्रमा अभिनय समेत गरे । बलिउडका चर्चीत अभिनेता सुशान्त सिंह राजले देहत्यागको निर्णय गरेसंगै अहिले त्यसको कारण खोज्न थालिएको छ । ६ दिन मात्र भएको थियो उनको पूर्व म्यानेजरले पनि देह’त्या’ग गरेकी थिइन् ।राजपुतले आ’त्म’ह’त्या गरेको नभई उनको ‘ह’त्या गरिएको आशंका परिवारले गरेका छन् ।
उनका परिवारले राजपुतले आ’त्म’ह’त्या गरेको नभएर उनको ह’त्या गरिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । कैयौँ चलचित्रमा खेलेका राजपुत आइतबार मुम्बाई बान्द्रास्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा झु’ण्डि’एको अवस्थामा भेटिएका थिए । प्रहरीले पनि उनको आ’त्म’ह’त्या भएको बताएको थियो । ‘उनले आ’त्मह’त्या गरेको भन्ने बारेमा हाम्रो विश्वास छैन, हामी परिवारका सदस्यहरुले यसको वि’रो’ध गरेका छौँ उनको ह’त्या भएको छ प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान गरोस्’ राजपुतका मामा आरसी सिंहले सोमबार भने।
बिहारका प्रहरी कमिसनर मनोज सिंहले घटनाको प्रकृति हेर्दा अहिलेसम्म आ’त्म’ह’त्या नै गरेको जस्तो देखिएको बताएका हुन् । भारतीय चलचित्र क्षेत्रका नायक राजपुतका मामा तथा आफन्तहरुले उनले आ’त्म’ह’त्या गर्ने कुनै कारण नरहेको भनेका छन् भने प्रहरीले आ’त्मह’त्या गरेको बारेमा कुनै सु’सा’इ’ड नोट पनि नभेटिएको बताएको छ ।
अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित सबै नेपाली निको भए
चीनले गर्यो कोरोनाको प्रभाव समाप्त भएको घोषणा
बिल गेट्सलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले लेखे भावुक पत्र !